ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ အဆက်အသွယ်မရပဲ ပျောက်ဆုံးနေလို့ ပူဆွေးဝမ်းနည်းနေခဲ့ရတဲ့ ဦးကျော်သူ - Myitter
November 21, 2019 Myitter Uncategorized 0
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ ကျော်သူဟာ တစ်ချိန်က ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်သူက အသက်အရွယ်တစ်ခု ရရှိလာပြီးတဲ့နောက် ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အဖြစ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ရိုက်ကူးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်သူက သူ့ရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့အတူတူ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်ရင်း ဘဝကို အကျိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ကျော်သူက သူ့ရဲ့ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားကာ လူပျောက်တိုင်ရတော့မလားဆိုပြီး အလွန်စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။
“၁၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ မနက်(၅:၀၀)နာရီ ရန်ကုန်လေဆိပ်ဆင်းပြီး မြိတ်မြို့သို့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အလည်အပါတ်သွားသည့် ကျွန်တော့်ချစ်ဇနီး ရွှေဇီးကွက်(ခ) မြင့်မြင့်ခင်ဖေ သည် ထိုနေ့မနက်(၉:၀၀)နာရီခန့်က ကျွန်တော့်ထံသို့ မြိတ်မြို့သို့ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြောခဲ့ပြီးသကာလ နေ့လည်ပိုင်းတွင် မြိတ်အနီးအနားပါတ်ဝန်းကျင်ရှိငါးလုပ်ငန်းများ।သစ်လုပ်ငန်းများအားသွားရောက်လေ့လာသည့်သတင်း।ဓါတ်ပုံပါ ပို့စ်အား သူမဧ။် FB မှ သတင်းတင်ပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး ယခုအချိန်အထိ FB နှင့်ဖုန်းမှအဆက်အသွယ်လုံးဝ မရတော့ပါကြောင်း”
“ရေမြင်ရင်မနေတတ်မထိုင်တတ် ရေထဲဆင်းရမှကျေနပ်သည့် ကျွန်တော့်မိန်းမကို တွေ့ရှိပါက ကျွန်တော်အရမ်းစိတ်ပူနေသောကြောင့် အမြန်ဆက်သွယ်ရန်ပြောပေးပါရန်ဟု သတင်းတင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် ယနေ့နေ့လည်(၄:၀၀)နာရီအချိန်ခန့်တွင် သတင်းမတင်ခင်နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖုန်းဆက်ကြည့်ရာ အင်တာနက်လိုင်းမရသည့်မြိတ်ကျွန်းစုပေါ်သို့ရောက်နေသဖြင့်တစ်ညနဲ့တစ်နေ့ပျောက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူမဧ။်အသံကိုကျွန်တော်ကြားလိုက်မှ ရင်ထဲက ဟင်းးးးး!!! ဟုသက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလိုက်မိပါတော့သည်။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အဖြစ်ကို ရင်ဖွင့်လာပါတယ်။
ကျော်သူကတော့ ခရီးလွန်ပြီး အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတဲ့ ဇနီးကို တော်တော်လေး စိတ်ပူနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကရဲ့ ထိပျတနျးမငျးသားတဈဦးဖွဈသူ ကြျောသူဟာ တဈခြိနျက ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့နှငျးဆီခိုငျ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ကြျောသူက အသကျအရှယျတဈခု ရရှိလာပွီးတဲ့နောကျ ဒါရိုကျတာတဈယောကျအဖွဈ ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှကေို ရိုကျကူးနတော ဖွဈပါတယျ။
ကြျောသူက သူ့ရဲ့ ဇနီး ဒျေါရှဇေီးကှကျနဲ့အတူတူ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျး လုပျကိုငျရငျး ဘဝကို အကြိုးရှိရှိ ဖွတျသနျးနပေါတယျ။ဒီနမှေ့ာတော့ ကြျောသူက သူ့ရဲ့ဇနီး ဒျေါရှဇေီးကှကျနဲ့ အဆကျအသှယျပွတျတောကျသှားကာ လူပြောကျတိုငျရတော့မလားဆိုပွီး အလှနျစိတျပူခဲ့ရတဲ့အကွောငျးကို အခုလိုပဲပွောပွထားပါတယျ။
“၁၉-၁၁-၂၀၁၉ ရကျနေ့ မနကျ(၅:၀၀)နာရီ ရနျကုနျလဆေိပျဆငျးပွီး မွိတျမွို့သို့ သူငယျခငျြးမြားနဲ့ အလညျအပါတျသှားသညျ့ ကြှနျတေျာ့ခဈြဇနီး ရှဇေီးကှကျ(ခ) မွငျ့မွငျ့ခငျဖေ သညျ ထိုနမေ့နကျ(၉:၀၀)နာရီခနျ့က ကြှနျတေျာ့ထံသို့ မွိတျမွို့သို့ရောကျပွီဖွဈကွောငျး ဖုနျးဆကျပွောခဲ့ပွီးသကာလ နလေ့ညျပိုငျးတှငျ မွိတျအနီးအနားပါတျဝနျးကငျြရှိငါးလုပျငနျးမြား।သဈလုပျငနျးမြားအားသှားရောကျလလေ့ာသညျ့သတငျး।ဓါတျပုံပါ ပို့ဈအား သူမဧ။ျ FB မှ သတငျးတငျပွီးသညျ့အခြိနျမှစပွီး ယခုအခြိနျအထိ FB နှငျ့ဖုနျးမှအဆကျအသှယျလုံးဝ မရတော့ပါကွောငျး”
“ရမွေငျရငျမနတေတျမထိုငျတတျ ရထေဲဆငျးရမှကနြေပျသညျ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို တှရှေိ့ပါက ကြှနျတျောအရမျးစိတျပူနသေောကွောငျ့ အမွနျဆကျသှယျရနျပွောပေးပါရနျဟု သတငျးတငျရနျအတှကျပွငျဆငျပွီးနောကျ ယနနေ့လေ့ညျ(၄:၀၀)နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ သတငျးမတငျခငျနောကျဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဖုနျးဆကျကွညျ့ရာ အငျတာနကျလိုငျးမရသညျ့မွိတျကြှနျးစုပျေါသို့ရောကျနသေဖွငျ့တဈညနဲ့တဈနပြေ့ောကျသှားခွငျးဖွဈကွောငျး သူမဧ။ျအသံကိုကြှနျတျောကွားလိုကျမှ ရငျထဲက ဟငျးးးးး!!! ဟုသကျပွငျးရှညျကွီး ခလြိုကျမိပါတော့သညျ။” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့အဖွဈကို ရငျဖှငျ့လာပါတယျ။
ကြျောသူကတော့ ခရီးလှနျပွီး အဆကျအသှယျပွတျတောကျသှားတဲ့ ဇနီးကို တျောတျောလေး စိတျပူနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။